HARPREET BRAR အမြင့်၊ အသက်၊ မိသားစု၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ပိုမိုသောအရာများ - ခရစ်ကက်
Harpreet Brar အမြင့်၊ အသက်၊ မိသားစု၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ပိုမိုသောအရာများ
အမည်ပြောင် ကြိုတင်  Facebook
အလုပ်အကိုင် ခရစ်ကက် (Bowler)
[နှစ်ခု] အိန္ဒိယ၏ Times သတင်းစာ အမြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) စင်တီမီတာ၌တည်၏ - 190,5 စင်တီမီတာ
မီတာအတွက် - 1.90 မီတာ
ပေ & လက်မ၌တည်၏ - ၆ '၃ '
နိုင်ငံတကာပွဲ ဦး ထွက် လုပ်ရမယ်
ဂျာစီနံပါတ် အမှတ် ၉၅ (အိန္ဒိယ U-23)
နံပါတ် ၉၅ (Kings XI Punjab)
ပြည်တွင်း / ပြည်နယ်အဖွဲ့ (များ) Kings XI ပန်ဂျပ်
အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ရှိပန်ဂျပ်ပြည်နယ်
•အသက် ၁၉ နှစ်အောက်ပန်ဂျပ်
•အသက် ၂၃ နှစ်အောက်ရှိပန်ဂျပ်
•အသက် ၂၃ နှစ်အောက်အိန္ဒိယ
နည်းပြ / ဆရာ Anil Kumble
မွေးနေ့ ၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၅ (စနေနေ့)
အသက် (၂၀၂၀ အထိ) ၂၅ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Moga, ပန်ဂျပ်
ဇာတိမြို့ Moga, ပန်ဂျပ်
ကျောင်း Kendriya Vidyalaya, AFS High Grounds, Chandigarh
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် G.G.D.S.D ကောလိပ်, Chandigarh
ဇာတ် Jatt  Facebook
မိဘများ ဖခင် - Mohinder Singh Brar (ပန်ဂျပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်မောင်း)
အမေ - Gurmeet Kaur Brar
မောင်နှမများ နှမ - Ramanpreet Kaur Brar
Harpreet Brar နှင့်ပတ်သက်သောလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Harpreet Singh သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှခရစ်ကတ်ကစားသမားဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပန်ဂျပ်အသင်းနှင့်အိန္ဒိယယူ -၃၃ အသင်းတို့အတွက်ကစားသည်။ သူသည် Kings XI Punjab မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရူပီး၏အခြေခံစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သိန်း ၂၀
@EasyRepost 'Brah Harpreet Brar #SaddaSquad di shaan vich chaar chann lagavega ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်တင်ပို့? @kxipofficial မှ #KXIP #LionsDen #LivePunjabiplayPunjabi '
မျှဝေသည် Harpreet Brar 7:37 pm အချိန် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 18, 2018 ရက်တွင် (@ harpreetsbrar95)
Harpreet သည်သူ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကို Punjab U-16 အသင်းနှင့်စတင်ခဲ့ပြီး Punjab U-19 နှင့် Punjab U-23 အသင်းများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ကျောင်းဝင်းခရစ်ကက်ပွဲစဉ်အတွင်း Harpreet Brar
Harpreet သည် ၇ နှစ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးအိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ် ၁၉၉၉ အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမတိုင်မီလေးကြိမ်တိုင်တိုင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်အသင်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်အသင်းအတွက်ရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ သူကအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီးအသင်းအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအဖြစ်ယူမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်၌pပြီလ ၂၀ ရက်တွင် Harpreet သည် Kings XI Punjab အတွက်သူ၏ Twenty20 ပွဲ ဦး ထွက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ပွဲသည် Feroz Shah Kotla အားကစားကွင်းရှိဒေလီမြို့တော်ကြီးနှင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
IPL ပွဲစဉ်အတွင်း Harpreet Brar ဘိုးလင်း
Hoshiarpur ကိုဆန့်ကျင်သောခရိုင်ပြိုင်ပွဲတွင် Ropar လက်အောက်မှ ၁၉ အသင်းအတွက်ကစားစဉ် Harpreet သည်ဝင်ပေါက်တစ်ခုထဲ၌ကက် ၁၀ ခုယူသည်။ ပွဲ၏ပထမ ဦး ဆုံးဝင်ထွက်ခြင်းအတွက်သူပွဲစဉ်အတွက်သူ့အဘို့စုစုပေါင်း 15 ကက်အောင်ကက်ငါးခုကိုယူ။ ဤသည်စံချိန်ယခင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖွင့်ခဲ့သည် Anil Kumble နှင့်အင်္ဂလန်ရဲ့ဂျင်မ် Laker ။  Hindustan Times သတင်းစာ
Hoshiarpur နှင့်စမ်းသပ်ပွဲတွင် Harpreet Brar
IPL နှင့် India U-23 တို့ကိုတရားရုံးတွင် Harpreet ကသူ၏အစီအစဉ် B ကိုပြင်ဆင်သည်။ အကယ်၍ သူမရွေးချယ်ပါကသူသည်ကျောင်းသားဗီဇာဖြင့်ကနေဒါသို့ပြောင်းရွှေ့သွားမည်၊ သို့မဟုတ်သူ၏သခင်၏နောက်သို့လိုက်ရန်သို့မဟုတ်သူ၏ဖခင်ကဲ့သို့ပန်ဂျပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်။
Harpreet Brar ဟာပန်ချာပီမင်းသမီးရဲ့ပရိသတ်ကြီးပါ Sonam bajwa ။ Harpreet သည် Sonam Bajwa ၏ပုံကြမ်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံအားသူ၏ Facebook account တွင်တင်ခဲ့သည်။
Sonam Bajwa အကြောင်းကို Harpreet Brar ရဲ့ Facebook post ကို
Harpreet G.G.D.S.D. တွင်လေ့လာနေစဉ် ကောလိပ်, Chandigarh; သူသည်ပါတီတစ်ခုမှကောလိပ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
Harpreet Brar သည်ကောလိပ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် SOI ပါတီမှရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်
Harpreet သည်ယခင်အိန္ဒိယလူမျိုး batsmen ကိုစဉ်းစားသည်။ Yuvraj Singh နှင့်တော်ဝင် Challengers Bangalore ကစားသမား, သခွားသီးကောင်စီ Singh ကမန်း ပုရစ်၌သူ၏စံပြအဖြစ်။ Yuvraj Singh ကပုရစ်ကစားခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး၎င်းကသူ့ကိုခရစ်ကက်သမားဖြစ်လာရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
Gurkeerat Singh ကမန်းနှင့်အတူ Harpreet Brar
↑နှစ် အိန္ဒိယ၏ Times သတင်းစာ
Rajeev Siddhartha အသက်၊ မိသားစု၊ ရည်းစား၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အခြားအရာများ
'Kya Hal, Mister Panchal' သရုပ်ဆောင်များလစာ - Maninder Singh၊ Kanchan Gupta, Ojaswi Oberoi,
Milkha Singh ခေတ်, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဇနီး, မိသားစု, အချက်အလက် & ပို
Shaan (အဆိုတော်) အသက်၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊ ကလေးများ၊
Lav Agarwal (IAS) အသက်၊ ဇာတ်၊ ဇနီး၊ ကလေး၊ မိသားစု၊
anushka shetty မိသားစု၏ပုံများ
Bhojpuri သရုပ်ဆောင် dinesh lal yadav ဇနီးအမည်
sasirekha parinayam အမှတ်စဉ်သူရဲကောင်းအမည်
Anil kapoor ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မများ
rakul preet Singh ရည်းစားနာမကိုအမှီ